Iminyaka eli-100 ukusukela ukuphela kweMfazwe yokuQala yeHlabathi. Iincwadi ezi-7 zokumkhumbula. | Uncwadi lwangoku
Iya kubakho ngoNovemba, kodwa sele ndingaphambi kwesikhumbuzo sika Ukuphela kweMfazwe Yehlabathi I okanye iMfazwe Enkulu. Unyana 100 iminyaka sele. Kwaye kuthi kuthi abo bangabalandeli bala maxesha anjengemfazwe kwinkulungwane ephelileyo, ngumhla ngaphandle kwamathandabuzo obalulekileyo. Kukho iincwadi ezingapheliyo, izincoko, iibhayografi kunye nezinye izinto ezipapashiweyo kwesi siqendu sothusayo soLuntu, ngelishwa, esiba nokuqhubeka nokoyikisa ngakumbi. Yi le Ukukhetha kwam ukuthobeka kokufundwa kwesi-7 malunga naloo ntlekele.
1 Ubuhle kunye neentlungu zokulwa - Peter Englund
2 Yonke into ethe cwaka ngaphambili - uEric Maria Remarque
3 Ndlelantle kwiiArms -Ernest Hemingway
4 Iindlela zozuko-Humphrey Cobb
5 Imfazwe Yehlabathi I yabalisela abagxeki - uJuan Eslava Galán
6 Ukuwa kweengxilimbela-uKen Follet
7 Iplani ebomvu - uManfred von Richthofen
Ubuhle kunye nentlungu yedabi -UPeter Englund
Ndinayo le ncwadi kunye naleyo Ubomi nekamva nguVasili Grossman. Banamandla nje, bayaphula intliziyo, banomdla kwaye banomdla. Kwaye bobabini kunjalo ngokusekwe kubungqina, iidayari, iileta kunye neefoto iqaqobana labantu besini esahlukileyo, ubuzwe kunye neendima abazibonileyo ezo zikhohlakeleyo.
EMpuma ukusuka kumbhali, umbhali-mbali, kunye nomfundi IsiSweden uPeter Englund Iqulethwe yimivimbo emfutshane, iziqwenga zeemvakalelo mihla le malunga I-20 yazo (umpu, iinjineli, oogqirha, abongikazi, abaqhubi) kuyo yonke iMfazwe Enkulu. Kukho kwakhona Iifoto ezingama-60 kunye nemifanekiso ezihamba neetekisi ezahlulwe zaba yiminyaka neentsuku. Kwaye kum enye yeencwadi ezilungileyo endikhe ndafunda ngalo mbandela.
Akukho ndaba ngaphambili -U-Eric Maria Remarque
Yiyo uhlobo lweklasikhi njengangaphambili nokwaziwa ngcono ngaphandle kwamathandabuzo. U-Erich Maria Remarque ngu isibizo yombhali waseJamani UErich paul uphawula, othathe inxaxheba nakwezongquzulwano. Ipapashwe ngo-1929, yayingumfanekiso wakhe kunye neziphumo zakhe ngokwembono a ijoni eliselula lasejamani Iminyaka engama-21 kubomi bemihla ngemihla ngaphambili.
Yenziwe Iinguqulelo ezimbini zefilimu. Inye kwi 1930Ngubani ophumelele Oscar ngeyona bhanyabhanya ibalaseleyo kunye nomlawuli obalaseleyo we Imbalasane kaLewis. Kwaye enye in 1979 Kumabonwakude awalathisayo UDelbert mann kwaye wenze ntoni IGlobal Globe kudidi lwayo kunyaka olandelayo.
Sala kakuhle kwimipu -U-Ernest Hemingway
Inokuba yenye yezona zinto zaziwayo kwimisebenzi ye- Ernest Hemingway kwaye yaphefumlelwa ngamava abo. Kum ngokuqinisekileyo yinto yodidi lweencwadi zehlabathi. Mhlawumbi waziwa ngcono ngeenguqulelo zakhe kumdlalo weqonga kunokuba afunde. Nangona kunjalo, oku ibali lothando phakathi komongikazi nejoni eliselula Ingcinga e-Italiya yeMfazwe yeHlabathi yokuQala ayinakulibaleka.
I-Lieutenant yaseMelika UFrederic Henry, umqhubi we-ambulensi, akanankathalo kwaye uyahamba, kodwa yonke into iyatshintsha xa edibana UCatherine Barkley, umongikazi omhle wase-Bhritane. Kwaye ekuqaleni u-lieutenant akafuni nto ngaphandle kokudlala ngothando kude kube yinto eguqukayo. Kodwa imfazwe iyamhlula kwaye yaphula yonke into. Kwaye xa kufuneka bobabini, uFrederic uya kuyiqonda eyona nto ibalulekileyo.
Iinguqulelo zakhe kwi-cinema zezi ze 1932, igugu lomnyama nomhlophe cinema, nge UGary Cooper noHelen Hayes njengabalinganiswa abaphambili. Emva kwexesha 1957, bekukho enye ababedlala kuyo URock Hudson noJennifer Jones. Ndigcina eyokuqala.
Iindlela zozuko -Humphrey Cobb
Kwakhona i-cinema kunye nenye yeengcibi zayo njengoko yayinjalo UStanley Kubrick yenze umsebenzi wobugcisa wale noveli ibhalwe yiAmerican Humphrey Coob kwaye yapapashwa kwi 1935. UCobb wayengomnye wamavolontiya okuqala aseMelika ukuya kwiNtshona Front. Uthathe inxaxheba kwidabi lase saseAmiens, apho wenzakala khona. Kule ncwadi unokufumana izicatshulwa kwidayari kaCobb (wayeneminyaka eli-17 ngelo xesha) awayeyibhala ngaphambili.
Kodwa njengomsebenzi woncwadi wawungabonakali. KwakunguKubrick owayeyifunda esemncinci kakhulu kwaye kwakungo-1957 xa, exhaswa ngabazobi be-United kunye nomdlali weqonga Kirk Douglas, inokuyiguqula ibe iklasikhi engenakuthelekiswa nanto yemidlalo bhanyabhanya.
Umyalezo wakho kumacala omabini awunakuba ngaphezulu i-antimilitarist kunye nompempe wokungabikho kokusesikweni kunye nobudenge obenziwe kolo ngquzulwano. Misela kwimisele yomlo, ibali, eliliyo esekwe kwiziganeko zokwenyani, ubalisa kuqhutywa (isohlwayo esingalunganga sokusilela kuhlaselo lokuzibulala ngokuchasene namaJamani), ngenxa yokungathobeli kunye nobugwala, amajoni amane we-181 webutho loMkhosi waseFrance.
Imfazwe yeHlabathi yokuQala yaxelelwa abagxeki -UJuan Eslava Galán
U-Eslava Galán lilizwi elingaphezulu kweligunyazisiweyo kwimicimbi yezembali. Oku kuboniswa ziincwadi zakhe ezahlukeneyo ngeziqephu zemfazwe ezahlukeneyo ngalo lonke ixesha. Kulomsebenzi usixelela ngenkqubela phambili kwezobuchwephesha ezifana nompu womatshini, itanki okanye inkwili ebandakanyekayo, nangabalinganiswa Mata Hari, iRaron Baron okanye iRasputin.
Ukufunda kwakhe kubandakanya i Uhambo, i iindlela zokuzonwabisa yeqela, i amasiko yoonongogo, kunye nemidlalo ye iintlola, kunye namanye amabali angaziwayo okanye abo bathi kamva baba ngamagama afanelekileyo ahlala kuloo mava.
Ukuwa kweengxilimbela -Ken Follet
UFollet wathunyelwa ngendlela enkulu kweyakhe Trilogy yenkulungwane eqala ngesihloko, mhlawumbi eyona ilungileyo kwezi zintathu. I-Epic, uthando, iintlekele, ukuthanda, intiyo, ukungcatsha kunye nazo zonke izinto kunye nokubonisa abalinganiswa Olona phawu lwentengiso lwalo mbhali waseWales udumileyo.
Siyayazi Iintsapho ezintlanu ezahlukeneyo (kuMntla Merika, eJamani, eRashiya, esiNgesi naseWales) zabalinganiswa abaya kuthi balandele ikamva labo kwihlabathi liphela nakwinkulungwane yonke. Kule ncwadi yokuqala, kunjalo, ijongene neMfazwe yeHlabathi yokuQala, inguquko yaseRussia kunye nomzabalazo wokuqala wamalungelo abasetyhini. Kwaye bonke baya kwazana kwaye baxube kwisimo esifanelekileyo ukufumanisa.
Inqwelomoya ebomvu -UManfred von Richthofen
Kwaye ekugqibeleni ndishiywe ngomnye wabadlali abadumileyo nabaziwayo beMfazwe yeHlabathi yokuQala. Kungenxa yokuba akunakwenzeka ukuba ungamazi uManfred von Richthofen, okanye IBaron ebomvu Kwiintsomi ezingunaphakade.
Richthofen kunye nomnxeba wakhe "Isekisi ebhabha" bahamba ngenqanawa baza balawula umoya phakathi kweyona nqwelo-moya yokulwa yabulala abantu ngelo xesha, i IAlbatross kunye neFokker. Bapeyinte ukusuka imibala ebabethayo ukucaphukisa utshaba. URichthofen wayenjalo ndenzakaliswe yimbumbulu entlokweni yakhe ngoJulayi 1917 kwaye ekubuyiseni kwakhe wabhala i ingxelo yobomi bakhe yintoni le ncwadi. Kuyo sifumana kumabali oqeqesho, ubumnandi bomoya kwaye, kunye neenkcazo ezineenkcukacha zobuchwephesha beenqwelo moya. Kwaye ubungqina obunje ngezi:
Kwiimitha ezilikhulu ukuphakama, umchasi wam wazama ukubhabha kwi-zigzag ukuthintela ithagethi yam. Emva koko kwavela ithuba lam. Bendimhlukumeza ukuya kuthi ga kwimitha engamashumi amahlanu, ndimdubula ngokungapheliyo. Indoda yesiNgesi yayiza kuwa ingenathemba. Ukufezekisa oku ndaphantse ndachitha imagazini iphela.
Utshaba lwam lwangqubana emaphethelweni emigca yethu ngokudubula entloko. Umpu wakhe wanamathela emhlabeni kwaye namhlanje uhombise umnyango wendlu yam.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iminyaka eli-100 ukusukela ukuphela kweMfazwe yokuQala yeHlabathi. Iincwadi ezi-7 zokumkhumbula.